Ungayilawula kanjani i-PC yakho ukude | Izindaba zamagajethi
Ungayilawula kanjani i-PC yakho ukude
U-Ignacio Sala | | Aplicaciones, Software
Ngaphambi kokuthandwa kwamafu, ukuphela kwendlela yokuqhubeka nokusebenza kusuka kwenye indawo kwakungokuvumelanisa yonke idatha ekhompyutheni yethu nge-pendrive, okungenani lokho ebesikwazi ukuthi singakudinga, indlela yokungasebenzisi ngenxa yesitoreji samafu wezinhlelo.
Kodwa-ke, akusona isixazululo sayo yonke into, ikakhulukazi uma enkampanini yethu, sisebenzisa uhlelo lwethu lokuphatha, uhlelo olunganikezi ithuba lokuxhuma kude noma oluningi kakhulu ukuba lungasetshenziselwa ukusetshenziswa ngezikhathi ezithile. Kulawa macala, isixazululo ukuxhuma ukude.
Okuwukuphela kwalokho esikuthola ethubeni lokuxhuma ukude ukuthi sidinga ukuthi imishini isebenze ngaso sonke isikhathi, noma iphumule, ukuze uxhumano lusungulwe lapho sithumela isicelo soxhumano. Lokhu kungaxazululwa kalula ngokuhlela ukukhanyisa nokuvala imishini yethu ukude, ukuze kuvulwe lapho sazi ukuthi siyisebenzisa kanjani.
Lapho sixhuma ukude, kuzo zonke izimo sidinga izinhlelo ezimbili, esisodwa esisebenza njengeklayenti, leso esisifaka kukhompyutha lapho sizoxhuma khona nesinye esisebenza njengeseva, leso esisifaka kukhompyutha ukuthi sifuna. ukuphatha ukude.
Akuzona zonke izinhlelo zokusebenza esikubonisa zona ngezansi ezidizayinelwe ukusebenza ukude nenye ikhompyutha ezisisebenzele kahle kulo msebenzi. Lapho sesicacile ukuthi zonke lezi zinhlelo zokusebenza zisebenza ngokugcwele, isinyathelo esilandelayo ukuzibuza ukuthi ngabe ziyifanele yini imali eziyibizayo (akuzona zonke ezimahhala).
1 Izinhlelo ze-desktop ezikude ze-PC ne-Mac
1.2 I-desktop desktop ye-Chrome
1.3 Ideskithophu ekude yeWindows
1.4 Noma yiliphi Ideski
1.5 Isiphathi sedeskithophu Ekude
1.6 Ideskithophu Ekude ye-Iperus
Izinhlelo ze-desktop ezikude ze-PC ne-Mac
Igama leTeamViewer lihlotshaniswa nokuxhumeka okukude kwamakhompyutha cishe kusukela amakhompyutha aqala ukufika emakhaya. Le sevisi ingenye yezindawo ezaziwa kakhulu futhi eziguquguqukayo kakhulu esingazithola emakethe, ngoba ayisivumeli kuphela ukuphatha iqembu ukude, kepha futhi isivumela ukuthi sidlulise amafayela phakathi kwamaqembu, ingxoxo ukuxhumana namanye amaqembu .. .
Ukusetshenziswa kohlelo lokusebenza kumahhala ngokuphelele kubasebenzisi abazimele, kepha hhayi ezinkampanini, izinkampani ezinezinhlelo ezahlukahlukene ezitholakalayo kuye ngenani lamakhompyutha esifuna ukuxhuma kuwo. ITeamViewer, iyatholakala kokubili IWindows njenge-MacOS, i-Linux, i-ChromeOS, i-Raspberry Pi, iOS ne-Android.
Isilawuli kude seTeamViewer
Isilawuli kude seTeamViewerMahhala
I-desktop desktop ye-Chrome
Isixazululo i-Google esinikeza sona silula kunazo zonke, futhi sisivumela ukuphatha ikhompyutha kude, kusuka kwenye ikhompyutha (i-PC / Mac noma i-Linux) noma kunoma iyiphi idivayisi yeselula ngohlelo lokusebenza oluhambisanayo. Ideskithophu Ekude ye-Google Chrome Akuyona into ngaphandle kwesandiso okufanele sisifake ngqo kusuka kufayela le- Isitolo se-Web Chrome ku-Google Chrome.
Uma sesiyifakile, kufanele sisebenzise isandiso kwikhompyutha esifuna ukuyixhuma futhi sikopishe ifayela le- ikhodi ekhonjiswe uhlelo lokusebenza. Kukhompuyutha esizoxhuma kuyo, sizofaka leyo khodi ukuze senze ukuxhumana. Lapho sesisungule ukuxhumana, singakugcina kukhompyutha yethu ukuze sikwazi ukuxhuma ngokuzayo.
Ideskithophu Ekude ye-Chrome imahhala ngokuphelele futhi kudinga ukuxhumeka okuzinzile ukuze kusebenze (ekuxhumaneni kwe-ADSL akusebenzi kahle, ake sithi).
Ideskithophu Ekude ye-Chrome
Ideskithophu Ekude ye-ChromeMahhala
Ideskithophu ekude yeWindows
Isixazululo esisinikezwa yiMicrosoft asitholakali kuzo zonke izinhlobo zeWindows, kuphela kuzinguqulo zePro neBusiness ukuxhuma ukude. Kusuka kwikhompyutha yeklayenti singaxhuma ngaphandle kwenkinga nge Windows 10 Uhlobo lwasekhaya. Lapho nje sisebenze lo msebenzi, ukuze siwusebenzise, ​​kufanele ilandwe esitolo seWindows app, MacOS, iOS ne-Android uhlelo lokusebenza oluhambisanayo.
Ungasebenzisa iklayenti le-Microsoft Remote Desktop ukwenza xhuma kwi-PC eyihlane nezinsizakusebenza zakho zomsebenzi kusuka cishe noma yikuphi usebenzisa cishe noma iyiphi idivayisi. Ungaxhuma kwi-PC yakho yomsebenzi futhi ukwazi ukufinyelela kuzo zonke izinhlelo zakho zokusebenza, amafayela nezinsizakusebenza zenethiwekhi kube sengathi uhleli etafuleni lakho. Ungashiya izinhlelo zivulekile emsebenzini bese ubuka lezo zinhlelo zokusebenza ekhaya, kuyo yonke iklayenti le-RD.
Ideskithophu Ekude ye-MicrosoftMahhala
Ideskithophu Ekude 8
Noma yiliphi Ideski
Olunye uhlelo lokusebenza olungadingi noma yikuphi ukutshalwa kwezimali ukuze lukwazi ukuxhuma ukude kwenye ikhompyutha, siluthola ku-Any Desk, uhlelo lokusebenza olutholakala kokubili IWindows njengeMacOS, iLinux, iBSD yamahhala, iOS ne-Android. Noma yiliphi i-Desk lisivumela ukuxhumana nabanye esisebenza nabo kudokhumenti efanayo, ukudlulisa amafayela phakathi kwamakhompyutha ahlukile, kusivumela ukuba senze ngezifiso isikhombimsebenzisi, irekhode ukuxhumana okwenziwe ... lezi zinketho zokugcina ziyatholakala kunguqulo iyatholakala ezinkampanini, inguqulo engekho mahhala, njengoba kunjalo naleyo enikezwa yiTeamViewer.
I-AnyDesk, isoftware yedeskithophu ekude
Umthuthukisi: I-AnyDesk Software GmbH
Ideskithophu ekude ye-AnyDeskMahhala
Isiphathi sedeskithophu Ekude
Isiphathi sedeskithophu yesilawuli kude (i-RDM) sigcina konke ukuxhumana okukude kungxenyekazi eyodwa okwabelwana ngayo ngokuphephile phakathi kwabasebenzisi nakulo lonke iqembu. Ngokusekelwa kwamakhulu obuchwepheshe obakhelwe ngaphakathi - kufaka phakathi ama-protocols amaningi nama-VPNs - kanye namathuluzi okuphatha iphasiwedi akhelwe ngaphakathi ebhizinisini, izilawuli zokufinyelela ezingeni eliyimbudumbudu kanye nezinga lomhlaba wonke, kanye nezinhlelo zokusebenza zeselula eziqinile zokugcwalisa amaklayenti wedeskithophu weWindows ne-Mac, i-RDM ummese wamasosha waseSwitzerland wokufinyelela kude.
Isiphathi sedeskithophu Ekude Itholakala mahhala ngokusetshenziswa okungewona umsebenzi kanye nezikhungo zemfundo. Iyahambisana neWindows, MacOS, iOS ne-Android.
Indawo Yokusebenzela Ama-Devolutions
Indawo Yokusebenzela Ama-DevolutionsMahhala
Ideskithophu Ekude ye-Iperus
I-Iperius Remote wuhlelo olulula nolwenza izinto ezihlukahlukene esivumela ukuthi sixhumeke ukude kunoma iyiphi ikhompyutha noma iseva ye-Windows. Ukufakwa akuyona inkimbinkimbi futhi kusivumela ukuthi senze ukudluliswa kwamafayela, izikhathi eziningi, ukufinyelela kokuzenzakalela kwesilawuli kude, izethulo nokwabelana kwesikrini.
Ukuphela kwento esingayithola ngale nsizakalo ukuthi okwamanje iyahambisana kuphela namakhompyutha weWindows, ngakho-ke uma une-Mac emsebenzini, kuzofanele ukhethe esinye sezixazululo ezihlukile esizikhombisile ngenhla. Ngokuqondene namadivayisi, amaselula, singasebenzisa futhi i-iPhone yethu noma i-Android ukuxhuma ukude.
Umthuthukisi: Faka iSoftware
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Aplicaciones » Ungayilawula kanjani i-PC yakho ukude
IHuawei P40 Lite E: Amakhamera amathathu ngezindleko eziphansi
I-EMUI 10.1 Beta Yomhlaba Wonke: AmaTheminali abuyekeza nokuthi ungakwenza kanjani